Soo kabasho xoog leh nooca faylka ah ee U disk - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Soo kabasho xoog leh nooca faylka ah ee U disk
Soo kabasho xoog leh nooca faylka ah ee U disk
Soo kabashada xogtu waxay bixisaa shaqo soo kabasho xoog leh marka loo eego nooca faylka, kaas oo loo adeegsan karo haddii ay dhacdo caymiska faylka. Si wax ku ool ah u soo celi faylasha aan qarin. Faylasha ay soo heleen nooca faylka waxaa lagu dhejiyay tusaha "Dhamaan Noocyada". Faylasha ay soo heleen qaabkan waxaa lagu magacaabaa nambar waxaana lagu dhejiyaa faylal kaladuwan nooc ahaan, tusaale ahaan, Dukumiintiyada Word waxaa lagu gelin doonaa faylka doc iyo docx. Faylasha noocee ah oo laga soo ceshaday noocaas ayaa ah natiijada kumbuyuutarka qotada dheer ee kombiyuutarka kaydinta. Haddii faylka lumay aan si guul leh looga soo ceshan karin sida ku xusan buugga qaab dhismeedka asalka ah, markaa adeegsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu daawado “dhammaan noocyada "Xogta ku jirta", halkan waa inta badan cawska badbaadinta ugu dambeeya ee soo kabashada xogta U disk! Mararka qaar, waxaa jira faylal fara badan oo dib loo soo kaban karo, iyo faylasha lumay si buuxda looma soo kabsan karo hal mar, isticmaaleha ayaa badbaadin kara iskaanka horusocodka, Markaa waxaad ubaahantahay inaad dib uqoranto marka ku xigta ee aad sawirto mar labaad, waqti badbaadin. Tallaabada 6: Hubi feylasha ubaahan in dib loo soo celiyo oo fuliya dib u soo kabashada
Kadib markii la helo faylasha u baahan dib u soo celinta, adeegsaduhu wuxuu hubin karaa faylasha u baahan in dib loo soo celiyo, ka dib "Badhanka xiga" wuxuu nuqul ka noqon doonaa faylashaan. Ka dib markay riixato batoonka "Next", adeegsaduhu wuxuu dejin karaa faylka bartilmaameedka u ah keydinta feylasha, sida ku cad halka hoose:
U disk data ka soo kabashada
Settings Kadib marka faylka bartilmaameedka la dhammeeyo, sii wad inaad riix batoonka "Next", iyo soo kabashada xogta ayaa bilaabi doonta inay qabato howlgalka nuqul xogta, sida lagu muujiyey jaantuskan soo socda: / pp. dhagsii "Fur Fure" si aad u furto faylka bartilmaameedka, isticmaaleha ayaa arki kara faylalka soo kabsaday; dhagsii "Faahfaahin" badhan si aad u aragto xaaladda dhabta ah ee wax lagu kaxaynayo; guji badhanka "Dhama" Howlgalka dib u soo kabashada xogta diskka. Sidaad arki karto, soo-kabashada xogtu waxay bixisaa istiraatijiyad qaab hawleed leh hawlgalka, geedi socodka soo kabashada xogta oo dhan waa mid aad u fudud, uma baahna adeegsadaha inuu leeyahay khibrad soo kabasho badan, kumbuyuutarna uma baahna. Baro aqoon badan oo aasaasi ah oo kombuyuutar ah. In kasta oo howlgalka soo kabashada xogta disk-ga USB uu yahay mid aad u fudud, wali waxaan xasuusineynaa inta badan isticmaaleyaasha in soo kabashada xogtu ay tahay shaqo la qabanayo. Users waa inay taxaddar ka muujiyaan howl maalmeedka iyo sameynta xogta, ayna sameyaan waxyaabo badan oo xog muhiim ah si looga fogaado luminta xogta.
PreU disk ayaa si lama filaan ah u baaba'ay intii la isticmaalayay
NextQayb ka soo kabashada kadib qaladka Ghost